ओली सरकारमा कस्ता कस्ता मन्त्री ? | सहारा टाइम्स
Home » Politics » ओली सरकारमा कस्ता कस्ता मन्त्री ?
ओली सरकारमा कस्ता कस्ता मन्त्री ?
काठमाडौं असार ५ गते । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा विभिन्न राजनीतिक दलको सहभागिता रहेको छ । राजतन्त्रवादी देखि, संघीयताबिरोधी सम्म गठबन्धनमा रहदाँ मन्त्रीमण्डलको बेलाबखतमा चर्चा हुने गरेको छ ।
संविधानमा व्यवस्था भएको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको विपक्षमा राप्रपा नेपालले देशव्यापी अभियान थालेको छ । राप्रपा नेपालले हिन्दूधर्म र राजतन्त्रको पक्षमा जनमत बनाउने अभियान चलाएको हो । फागुनदेखि सुरु भएको अभियान आगामी कात्तिकसम्म चल्ने सो पार्टीले जनाएको छ । अहिलेसम्म पाँचवटा विकास क्षेत्र र १४ जिल्लामा अभियान गरिएको राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले बताए ।
सोही संविधानअनुसार शपथ खाएर राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी उपप्रधानमन्त्री तथा गरिबी निवारण एवं सहकारीमन्त्री छन् । तर, बहालवाला मन्त्रीकै हैसियतमा केसी संविधानकै व्यवस्थाविपरीत संघीयता खारेजीको अभियानमा लागेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।